देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प गर्ने व्यवसायीको निर्णय - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ३ बैशाख २०७५, सोमबार १९:५८
काठमाडौं । सिन्डिकेट हटाउन सरकारले चालेको कदमविरुद्ध यातायात व्यवसायीले वैशाख २६ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
आगामी मंसिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ महशुल दर लागू हुने भएको छ। बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन
मङ्सिर १ गतेदेखि बिजुलीको नयाँ महसुल दर लागु हुने भएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण
बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार गत मंगलबारको